Xafiiska Arrimaha Gudaha ee UK ee loo yaqaan (Home Office) oo ku hanjabay in uu dhimi doono tirada Visa ha waxbarashada ee la siiyo ardayda Ajaaniibta ah. | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Xafiiska Arrimaha Gudaha ee UK ee loo yaqaan (Home Office) oo ku hanjabay in uu dhimi doono tirada Visa ha waxbarashada ee la siiyo ardayda Ajaaniibta ah.
Xafiiska Arrimaha Gudaha ee UK ee loo yaqaan (Home Office) oo ku hanjabay in uu dhimi doono tirada Visa ha waxbarashada ee la siiyo ardayda Ajaaniibta ah.
Welwel sii kordhaya oo ku saabsan ardayda caalamiga ah dhibaatada ay kala kulamayan diidmooyinka ” adag oo aan cududaarka laheyn”ee dal ku galka UK taas oo ay ku kacan Saraakiil ka tirsan Xafiiska arimaha gudaha ee UK (Home Office) ka dib markii ardaydasi ka helaan aqbalid gelitaanka (Admission) jaamacadaha UK, warar kale oo soo baxayo ayaa sheegaya in xafiisku doonayo inuu sii adkeeyo bixinta dal ku galka taasoo ay la socdaan talaabooyin kale oo dheeri ah.
Ku dhowaad 250,000 oo “wareysiyo kalsooni” ayaa ilaa hadda lala sameeyey ardayda aan ka imaanin dalalka kale ee yurub labadii sano ee la soo dhaafay, waxana fiisooyinka loo diiday in kabadan boqolkiiba sagaal (9%) codsadayaasha celcelis ahaan muddadaas, waa tirada laga soo xigtay dhanka dowladda Ingiriiska.
Golaha qaabilsan arimaha aradayda caalamiga UK loona soo gaabiyo (UKCISA), oo ay xubno kayihiin dhammaan jaamacadaha Ingiriiska, ayaa sheegay in uu helay “koror la taaban karo ee wararka diidmooyinka [visa] ku salaysan oo laga helaayo ilo aad loogu kalsoonyahay.
Warbixintan loo diray xafiiska arrimaha gudaha, UKCISA ayaa ku dooday warar ka soo baxayo jaamacadaha in uu qorayo sababaha diidmada loo sheego ardayda ka dib markii ay waraysiyada kalsoonida siiyaan saraakiisha waaxda, oo ay ku jiraan “in aaney ogayn tirada ardayda ay u badan tahay in ay fasalka la fadhiistaan”, “in aaney waxba ka ogayn imtixaanka taariikhaha laga qaadayo “iyo” in loo sheego in ay baranayaan “cunto qore” (deitition) taasoo markii horaba aan qorsha ugu jirin iyo ayadoo aaney jirin baahi loo qabo qibrada cunto qore dalka Suuriya oo ardayda badankood ka yimadaan ”
Dhanka kale, dhawr ilood oo waaxda ayaa soo jeediyay in xafiiska arrimaha gudaha in uu ka fiirsanayo qorshayaasha hoos loogu dhigaayo si loo yareeyo tirada visa diidmada, in la ogol yahay hadii ay hay’adaha doonayaa in ay noqdan kafaala ayadoo la hoosgeynayo Tier 4 nidaamka loo yaqaan ee lagu maamulo ardayda wadamada dibadda ka yimado, laga bilaabo 10 boqolkiiba wadarta codsiyada ilaa 5 boqolkiiba, waxaa kaloo suurogal ah in la maro marxaladda ku meel gaar ah 8 boqolkiiba.
Haddii heerka diidmada hay’adaha ‘kor u kacdo heer ka sarreeya inta loo ogol yahay, waxey halis ugu jiran inay waayaan liisanka ay ogolaanshaha ku siyaan ardayda wadamada dibadda.
Dawladda ayaa hoos u dhigtay heerka diidmada ogolanshaha oo ahaa 20 boqolkiiba gaarsiisayna illaa 10 boqolkiiba sanadkii la soo dhaafay.
Todobaadkii la soo dhaafay, xafiiska arimaha gudaha wuxuu shir la yeeshay wakiillo ganacsiga ee Jaamacadaha UK oo loo yaqan (UUK) halkaas oo looga sii shiraacaday ra’yi ku saabsan qorshe si kor loogu qaado heerarka ugu hooseeya ee Ingiriisiga looga baahan yahay ardayda si ay u helaan fiisaha.
Dominic Scott oo ah madaxa fulinta UKCISA, ayaa yiri: “Waxaa jira dareen guud oo ku saabsan inan adkeyno afar ama shan siyaabood oo kala duwan.”
Tani ayaa dhacay “iyadoo qofna dhaheyn ” waxaan doonayaa in la yareeyo tirada ardayda caalamiga ah sababtoo ah waxaan heysanaa tiro aad badan ‘”, ayuu hadalkiisa ku daray. “Laakiin waxaa jira habab kala duwan oo maamulkaas uu si dhab ah ku yeelan doono saamayn.”
tirooyinka wareysiga kalsoonida, Pam Tatlow, maamulka sare ee kooxda loo yaqaan (Million+ Group) ee ka socdo jaamacadaha cusub, ayaa sheegay in aan la ogeyn in Saraakiisha sameeyeen “eex-la’aan” go’aan qaadashada wareysiyada kalsoonidii ” waxeey wareysiyadu dhaceen ka dib markii jaamacadaha soo saareen go’aanka xaqiijinta aqbalitaanka waxbarasho “.
Tirooyinka wareeysiga kalsoonida (credibility interviews) iyo cabsida laga qabo xanibaadyo dheeri ah ee dal-ku-gal ayaa imaanayo xili xisbiga muxaafidka ku yeelanayo kulan sanadeedkisa magaaladda Mancherter, ilo wareedyo lagahelaayo qeybaha kala duwan ayaa sare u qaadaya suurogalnimada inta uu san shirkuba bilaabmin in loo isticmaalo in lagu dhawaaqo isbadel siyaasad cusub oo ku aadan ardayda caalamiga ah, taas oo ah arin markii horeba kala qeybisay golaha wasiiradda.
Previous PostUrurrada macalimiinta Carabta oo ku dhawaqay Ururka cusub ee Waxbarashada dalalka carabta ah Next PostWaxbarashadii Berisamaadka